पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली दिल्ली पुगेर पुरानै नक्शाको ब्यानरमुनि भाषण गरे ! - Himali Patrika
पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली दिल्ली पुगेर पुरानै नक्शाको ब्यानरमुनि भाषण गरे !
हिमाली पत्रिका २ माघ २०७७, 6:59 pm
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पुरानै नक्शाको ब्यानर राखेर गरोके सम्बोधनलाई नेपालमा आलोचना भइरहेको छ ।
भारतको भ्रमणमा रहेका ज्ञवालीले भारतको विश्व मामिला परिषद्ले आयोजना गरेका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको पुरानै नक्शा अंकित ब्यानर राखेर भाषण गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस २७ गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको नयाँ नक्शा, सीमा विवादबारे छलफल हुने बताएका थिए ।
पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बिहीबार नयाँदिल्ली गएका हुन् । जटिल बन्दै गएको राजनीतिक परिस्थितिबीच तय भएको भ्रमणलाई लिएर देशभित्र समर्थन र विरोधमा आवाज उठिरहेका बेला उनले औपचारिक कार्यक्रममा उनले प्रयोग गरेको पुरानै नक्शाअंकित ब्यानरलाई भने झनै विवाद तिम्त्याएको छ ।
भारतले भने सीमाको विवाद संयुक्त आयोगमा छलफल नगर्ने स्पष्ट गरेको थियो । बिहिबार मात्रै भारतीय विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्न बेग्लै संयन्त्र आवश्यक भएको आशयको कुरा गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई जे जसरी प्रचार गरिएपनि अन्ततः यो औपचारिक बैठक भन्दा बढी भने हुन सकेको छैन । अझ त्यसमा परिषदको आजको कार्यक्रममा उनले कनेक्टिभिटी र परस्पर साझेदारीको जे जति कुरा गरेपनि नेपाली भूमि भारतमा नै रहेको दर्शाउने पुरानै नक्साको ब्यानर सामु उनले भाषण गरेको विषय अहिले निकै चर्चामा आएको हो ।